Yakazara Spectrum Mwenje Source Cob LED yePasi pevhu Chiedza FT Series 1018, China yakazara Spectrum Mwenje Tsime Cob LED yePasi Pevhu Mwenje FT Series 1018 Vagadziri, Vanotengesa, Fakisi - FETON CORPORATION Co, Ltd
Yakazara Spectrum Chiedza Source Cob LED yePasi pevhu Chiedza FT Series 1018
Inosimudza Raka: Inodziya Ichena / Neutral White / inotonhora Ichena
Base Matombo: Zvakajairika ceramic
CRI: Zvakajairika Ra95, Yakasarudzika 98,99 inoialble
Simba rinowanikwa: 20w, 30w, 40w, 50w
◆ Nyanzvi yekuvhenekesa nehukuru hwekuzivikanwa kwemavara.
◆ SMT ceramic package ine mhangura dhamu, inopa iyo yakawanda kuwonekera.
Kuvhenekerwa kwemasuo ezuva-rekupenya uye shanduko mukupenya kwakadzika zvichienderana nenzvimbo, zuva uye nguva.
◆ Indasitiri yakaderera yemafuta inopikisa.
◆ Natural masisitimu mwenje mwenje, inotakurwa kune hutano mwenje.
◆ Chaiye uye chakajeka ruvara kubereka, Kudzoka-kune-mavambo color expression.
◆ Universal kuwonekera, kusanganisira UVA uye kure dzvuku mwenje.
Also Izvo zvakare neiyo yakanyanya CRI (CRI> 97).
◆ Superior Corrosion RobustnessWide huwandu hwechivheneko flux uye yakakwirira kushanda.
◆ Nzvimbo-inoshamwaridzika, yakareba hupenyu hwakareba uye yakakwirira kuvimbika.
(1) Yakareba inguva yakajeka mwenje uye hutano-hutano hwekutarisa
(2) Yakakodzera kuderedzwa kwemavara mamiriro
(3) HD Studios uye inokosha mwenje
1.Our Chiyedza sosi inowana yakazara masisitimu uye yakakwirira mhando chena mwenje mune imwechete SMD kupakata, iyo iri miviri inobudirira horticultural light sosi uye yekushongedza yekuvhenekesa mwenje sosi ine yakakura mavara kubereka zvakare.
2.Iyechete-kurongedza akawanda-anotaridzika masikirwo eEMO zvakanyanya kurerutsa kugadzirwa uye kusimudzira kwesuminaire, kupfupisa kutenderera kutenderera uye nguva yekugadzira uye kuderedza mitengo.
3.Kubudirira kubudirira kuderedza kupisa kwemafuta zvakanyanya, yedu sosi yechiedza inogadzira zvimwe sarudzo kuti ifananidze zvigadzirwa zve luminaire kugadzirwa pamwe nekuita kwakakwana, inobatsira, yakakwirira lumen density, nezvimwe.